အောက်တိုဘာလ 2018 - 💌 WebTK - သင်၏လက်မှတ်မှ WebTalK 🚀, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သတင်း & ပိုပြီး Invite 🔥
တစ်လ: အောက်တိုဘာလ 2018
Webtalk 2018-10-27-2 - RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို
ဇြန္လ 2, 2019 အောက်တိုဘာလ 27, 2018 by Webtk.co
Webtalk'' s ကိုမူပိုင်ခွင့်-ဆိုင်းငံ့ SocialCRM ညာဘက်ဆက်သွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သို့တည်ဆောက်ထားသည်။
ဤဖြစ်စဉ်ကိုသင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၏လက်ငင်းအသားအရောင်ခွဲခြားပေးသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: beta ကို, ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, Microsoft က, Outlook.com, ရည်ညွန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး မှတ်ချက် Leave
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-10-27
WEBTALK ကျွန်ုပ်တို့၏ PUBLIC Beta Version မှာ non-stop ကြီးထွားလာသည်! သင့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်ထောက်ခံမှုများအတွက်သင်တို့ရှိသမျှကျေးဇူးတင်ပါသည်
လွန်ခဲ့သော ၃ လအတွင်းရာပေါင်းများစွာသောတိုးတက်မှုများအားလုံးသည်သင်၏တုန့်ပြန်မှုအားလုံး၏ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်သည်။ … ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: Webtalk beta ကို, Webtalk စာရင်းအင်း မှတ်ချက် Leave
Webtalk 2018-10-26-2 - RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို
ဇြန္လ 2, 2019 အောက်တိုဘာလ 26, 2018 by Webtk.co
အခုပဲ Webtalk အလွန်ကြီးစွာသောအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးမဟုတ်, ဝင်ငွေမျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ပေးအပ်ခြင်း, ဆိုလိုတာက Beta ကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခွန်ဝန်ကြီးဌာနမျိုးဆက်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: Advertising ကြော်ငြာ, Affiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, B2B, ကလပ် Penguins, ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, e-commerce, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, လွန်ကဲကဲ multiplayer အွန်လိုင်းဂိမ်း, SocialCPX, ခိုးရာပါပစ္စည်း, Webtalk Inc မှ, Webtalk စာရင်းအင်း, Webtalk'' s ကိုဘဏ္ဍာရေး, Webtalk'' s ကိုလမ်းပြမြေပုံ, Webtalk'' s ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်, အင်တာနက်မှလမ်းခွဲ မှတ်ချက် Leave
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-10-23
မေလ 15, 2019 အောက်တိုဘာလ 23, 2018 by Webtk.co
ဘာ Webtalk ယနေ့ကျနော်တို့စီစဉ်ထားပြီအနာဂတ်ထက်အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောကြည့်ရှုသည်။ ဒါဟာဗိသုကာပညာရှင်မှသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နှစ်ပေါင်းများစွာ ယူ. တစ်ခုတည်းစနစ်ကဒီဇိုင်း ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား အကြောင်းအရာ Webtalk, Webtalk သတင်း Tags: Advertising ကြော်ငြာ, Affiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်များ, ဆက်သွယ်ရေးဒီဇိုင်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, e-commerce, အင်တာနက်ကို, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ထုတ်ကုန်ပုံစံ, ရည်ညွန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, SocialCPX, SocialCRM, အားဖြင့် Webpay Webtalk, Webtalk ခ်ိတ္ဆက္ပါ, Webtalk ဖောင်ဒေးရှင်း, Webtalk နည်းပညာကို, Webtalk Verify, Webtalk'' s ကိုမစ်ရှင် မှတ်ချက် Leave
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-10-20
မေလ 15, 2019 အောက်တိုဘာလ 20, 2018 by Webtk.co
WEBTALK UPDATE: ယခုကြှနျုပျတို့ကျြော 1.2 အသုံးပြုသူသန်းဖူး & ယခုကြှနျုပျတို့ Amazon Alexa အားဖြင့်လောကဓာတ်မှာထိပ်တန်း 32,000 site ၏တစ်ဦးက ONE rated ကြသည်!
မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပိုမို BIG သတင်းများလည်းမရှိ,
TECH UPDATE: ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: Alexa အင်တာနက်ကို, အမေဇုံ, အမေဇုံ Alexa, Bing မှ, ကုမ္ပဏီများ, အွန်လိုင်းဂီတစတိုး, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း, universal ကို Windows ပလက်ဖောင်း apps များ, Webtalk စာရင်းအင်း, အင်တာနက်မှလမ်းခွဲ မှတ်ချက် Leave
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-10-19
မေလ 15, 2019 အောက်တိုဘာလ 19, 2018 by Webtk.co
WEBTALK UPDATE: ကျနော်တို့ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်စေသောပြဿနာတည်ရှိခြင်းနှင့် fixed ။ အသုံးပြုသူတစ်ဦး Auto-accept နှင့်ဆက်သွယ်မှုအဖြစ်အခြားအသုံးပြုသူများ Auto-ကိုတောင်းဆိုဖို့ bot ကို install ခဲ့သည်။
အဖြစ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: ဆော့ဖျဝဲ Go, Instagram ကို, အင်တာနက်ကို bot, လည်ပတ်မှုစနစ်များ, ဓာတ်ပုံဝေမျှခြင်း, ဆိုရှယ်မီဒီယာ, social networking န်ဆောင်မှုများ, Software များ, ဗီဒီယိုကို hosting, Vimeo, Webtalk beta ကို, Webtalk လုံခွုံရေး, Webtalk နည်းပညာကို, Webtalk'' s ကိုလမ်းပြမြေပုံ, အင်တာနက်မှလမ်းခွဲ, YouTube ကို မှတ်ချက် Leave
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-10-18
မေလ 15, 2019 အောက်တိုဘာလ 18, 2018 by Webtk.co
ငါ့အလေးတွေ 2-နှစ်ရှိခဲ့ကြအစဉ်အဆက်ကတည်းကသူတို့ကိုငါတောင်းသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်သို့ထိုအ 4-ခြေလှမ်းများ ingrained ကြပါပြီ "သင်သည်အဘယ်သို့ယနေ့လုပ်ဖို့သွားမည်နည်း" စာရင်းပြုစုဖို့သူတို့ကိုလိုအပ်တိုင်းနံနက် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: ဆောင်းပါးများ, ဉာဏ်ရည်တု, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်, ကော်ပိုရိတ်ကျင့်ဝတ်, က်င့္၀တ္မ်ား, ဂီတအဖွဲ့များကို, အသက်တာ၏ဒဿန, RJ Garbowicz, လှေကား, ခြေလှမ်းများ, နည်းပညာ, Webtalk'' s ကိုကျင့်ဝတ် မှတ်ချက် Leave
Webtalk 2018-10-17-1 - RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို
မေလ 11, 2019 အောက်တိုဘာလ 17, 2018 by Webtk.co
Webtalk UPDATE: ကျနော်တို့ရုံအသွားအလာဟန်ချက်ညီ load အခြားဒေတာဘေ့စ server ကိုစတင်များနှင့်လက်ရှိဒေတာတုန်းပဲဒုတိယ server ကိုမှကူးယူထားပါသည်။ သငျသညျနှေးနှေးဝန်ကြုံနေရနေတယ်ဆိုရင် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: Webtalk beta ကို, Webtalk နည်းပညာကို မှတ်ချက် Leave
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-10-17
WEBTALK UPDATE: ယနေ့ဝမ်းနည်းစွာကျနော်တို့အလားအလာကလုံခြုံရေးအန္တရာယ်ကြောင့်ပရိုဖိုင်းကနေ iframe ဆေးထိုးနိုင်စွမ်းဆွဲထုတ်ခဲ့ရသည်။ သင်ဆဲပဲ embedded မဟုတ် iframes HTML ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ယာယီအဖြစ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: computing, မာတိကာ, ဘောင်, HTML ကို, HTML ကိုဒြပ်စင်, iframe, Webtalk အဖျား, အင်တာနက်မှလမ်းခွဲ မှတ်ချက် Leave